Akụkọ - Shanghai Copak Industry Co., Ltd. Sourcing Office Na Shanghai
Shanghai COPAK Industry Co., Ltd. nke e guzobere na 2015, na ụlọ ọrụ ahịa na Shanghai na ụlọ ọrụ metụtara na Zhejiang. COPAK bụ ọkachamara soplaya nke Eco-enyi na enyi nri & onunu nkwakọ ngwaahịa: PET iko, PET karama, Akwụkwọ ọkwá, wdg
Anyị ọrụ na shanghai tumadi-elekwasị anya na mba trading na ọkachamara sourcing. E wezụga PET CUPS, PITA PITA, AKW PAKWỌ AKW ,KWỌ, anyị nwekwara ike ịzụ ahịa ngwaahịa ndị ọzọ. Anyị ọkachamara sourcing otu nwere ike isi iyi elu àgwà na asọmpi price ngwaahịa. Anyị ga-akwado 100% nnyocha tupu Mbupu.
Anyị Shanghai sourcing ọrụ na-arụ ọrụ dị ka ndị na-esonụ usoro.
Mgbe ndị ahịa chọrọ ihe anyị anaghị ewepụta (PET CUP, PET BOTTLE AND PAUL PAUL na-enye site na ụlọ ọrụ anyị), anyị ga-elele nkọwa niile achọrọ gụnyere agba, ọdịdị, ojiji na mbipụta ma ọ bụ mbukota, mgbe ahụ anyị ga-eweta ngwaahịa ziri ezi maka gị ma nweta ọnụahịa site na ụlọ ọrụ. Mgbe anyị tụlechara ogo na ọnụahịa, anyị ga-eleta ụlọ ọrụ ahụ wee lelee ụlọ ọrụ ahụ n'ọtụtụ akụkụ dịka usoro ntinye, ikike mmepụta ihe, gburugburu ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ha na njikwa mma Mgbe ahụ, anyị ga-ahọrọ nke kwesịrị ekwesị ịkwado. Mgbe emechara ha, anyị ga-ezite ndị nyocha maka ịlele ngwaahịa ndị a. Mgbe ahụ enwere ike ịhazi mbupu.
Peoplefọdụ ndị nwere ike na-echegbu onwe banyere àgwà. N'ezie, anyị na-eme nyocha 100% dị mma tupu ebupu. Ma anyị nwere usoro nkwenye dị mma. Ọ bụrụ n’ịchọta nsogbu ọ bụla na ngwaahịa anyị, Naanị zipụ vidiyo na eserese. Anyị ga-resend ezi mma ibu kama nke ezughị oke ngwaahịa gị ọzọ.
Banyere ọnụahịa ahụ, ọ ga-abụ nke asọmpi. Anyị nwetara ọnụ ahịa mgbe anyị nyochachara ụlọ ọrụ iri na ise. Anyị enweghị ọtụtụ uru. Anyị nwere iwu uru naanị erughị 10%. Anyị maara nke ọma na ahịa China ma nwee ike ịchọta ezigbo ndị na-eweta gị. Ọzọkwa ị nwere ike ịzụta ihe ọ bụla ị chọrọ n'aka anyị, ịkwesighi ịchọta ndị na-eweta gị. Nwere ike ịmara na ịchọta ndị na-ebubata ngwa ahịa dị mgbagwoju anya na ọ dịghị mfe ịchọta ezigbo.
Ndị ọrụ anyị nwere ike ịsụ Bekee, Spanish, Arabic. Naanị nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Ozi ịntanetị, mkparịta ụka n'ịntanetị, ma ọ bụ oku na-anabata niile.